Kenya & Al-Shabaab oo xeelad dagaal oo cusub oo aan horey looga baran bilaabay – SBC
Kenya & Al-Shabaab oo xeelad dagaal oo cusub oo aan horey looga baran bilaabay
Posted by editor on December 13, 2011 Comments
Iyadoo dagaalka hubaysan ee u dhaxeeya Kenya & Al-Shabaab uu mareyo heerkii ugu sareeyey oo dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaara, ayaa hada waxaa dagaalka la isku adeegsanayaa nooc cusub oo xeelad dagaal ah kaasi oo ah markii ugu horeysay.
Xeeladan dagaal ee cusub ayaan aheyn mid hub ama qori loo adeegsanayo hase yeeshee waxaa dagaalku haatan u soo wareegay dhanka Internet-ka iyadoo dawlada Kenya mudooyinkii ugu dambeeyey wadey olole dhanka Internet-ka oo ay dacaayado ugu sameynaysay falalka Al-Shabaab isla markaana warbixino ka bixinaysay hawlgalka ciidamadeedu ka wadaan gudaha Kenya.
Dagaalka ugu weyn ayaa waxaa wadey afhayeenka ciidamada Kenya Maj. Emmanuel Chirchir, kaasi oo aalada Internet-ka gaar ahaan adeega xiriirka dadweynaha ee Twitter-ka ka sameeyey bar si gaar ah loogu shaaciyo wararka iyo warbixinada ugu dambeeyey ee hawlgalka ciidan ee Kenya ee Soomaaliya ka wado kaasi oo ay sheegtey inay kula dagaalamayso Al-Shabaab.
Bartaasi Internet-ka ee Twitter-ka ee uu sameeyey Maj. Emmanuel Chirchir http://twitter.com/MajorEChirchir , waxaa ku xiran oo wararka ka quuta ku dhawaad 11 kun oo raacayaal/followers kuwaasi oo daalacanaya wararka uu soo galiyo afhayeenka, waxaana twitter-kaasi geesaha ka saaran astaanka qaranka Kenya iyo calanka wadanka Kenya, iyadoo lagu xardhay qoraalo ah Dawlada Kenya (The Kenya Government), in uu yahay page colaad ku saleysan waxaa ku xardhan sawiro askari ku hubaysan buntuq taasi oo muujinaysa in xaalad dagaal uu ku aadan yahay page-kaasi.
Hadaba xarakada Al-Shabaab ayaa iyaguna geestooda ka galey adeegaasi Twitter-ka kaasi oo u muuqanaya mid ay ku doonayaan inay kor ugu qaadayaan ololaha dhanka propaganda-da maadama Kenya dhankeeda ka wado mid la mid ah oo Twitter-ka ku aadan.
Twitter-ka Al-Shabaab http://twitter.com/#!/HSMPress oo lagu magacaabo HMS Press Office waxaa geeska midig saaran calankooda iyadoo la soo galiyey fariimo ku aadan gulufka dagaal ee Soomaaliya ay ku soo qaadey Kenya in uu noqon doono mid dhabarka ka jaba.
Sidoo kale Shabaabka oo aad u adeegsada farsamada Internet-ka waxay ku soo bandhigeen qaybta sawirada ee Twitter-kooda sawiro askar fara badan oo ka mid ahaa AMISOM oo la aaminsan yahay in ay yihiin kuwii ku dhintey dagaaladii Dayniile, waxaana ka muuqda sawirada teesarayaasha ama waraaqaha aqoonsiga ee ciidan iyo waliba shahaadooyin dhanka tababarada ciidanka oo ay qaarkood siiyeen Taliska ciidamada Mareykanka.
Talaabadan ayaa dad badani oo ku xeel dheer arimaha diblumaasiyada waxay ku tilmaameen mid Shabaabku fariin ugu dirayaan shacabka wadamada Kenya, Ugandha & Burundi oo ay ciidamadoodu ku lug leeyihiin dagaalka ka dhanka ah Shabaabka.
Twitter-ka Al-Shabaabku sameysteen todobaadkii hore waxaa ilaa iyo hada iska diiwan galiyey oo wararka ka qaata ama ku xiran marti ku dhaw 3 kun, waxaana had iyo goor lagu soo daabacayaa fariimo English ah oo joogto ah.
E.J. Hogendoorn oo ka tirsan International Crisis Group oo ka hadlayey talaabooyinka dhanka Internet-ka gaar ahaan Twitter-ka ee ay Kenya & Al-Shabaab adeegsanayaan wuxuu ku tilmaamay mid qayb ka ah dacaayadaha dagaalka.
Maalinimadii Isniintii Shabaabku waxay soo galiyeen bartooda Twitter-ka fariin ay ku eedeyeen in ciidamada Kenya ay soo celiyaan taariikh hore oo gumaad ay ka geysteen waqooyiga bari ee Kenya oo ay u geysteen dadka Soomaalida ka soo jeeda, dhacdadaasi oo dhacdey 1984-tii hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda waxay cadeeyeen in 3 kun oo rag ah oo cirqigoodu ka soo jeedo Soomaali lagu diley hawlgalkaasi.
Wakaalada wararka ee The Associated Press (AP) oo wax ka qortey labada Twitter ee Kenya & Al-Shabaab adeegsanayaan waxay ku sheegtey in si sharciyan ah loo aasaasay, balse waxaa la siwaydiinayaa cida u qorta Shabaabka Twitter-ka, laakiin AP waxay sheegtey in ay jiraan tiro Mareykan ah oo badankoodu yihiin Soomaali ka tagey Mareykanka oo ku biirey ururka Al-Shabaab oo ay dawladu Mareykanku ku shaabadeysay urur argagixiso.
Fariimaha kale ee la soo galiyey Twitter-ka Shabaabka waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka Kenya I ay duqeyn u geysteen xarumaha quudinta dadka tabaaleysan ee magaalada baardheere ee hay’ada Laanqeynrta Cas, isla markaana tiro haween iyo caruur ah ay ku dhaawacmeen.
Maalin ka dib Laanqeynrta Cas waxay xaqiijisay duqeyn ku habsatey xarumaheeda balse aanay jirin wax khasaare maadama xiligaasi aanay dad joogin goobahaasi.
Labada account ee Twitter-ka ee Shabaabka & Kenya adeegsanayaan hoos ka eeg.